aasaaska 'cryptography'
Ugu Weyn Ee Amniga Aasaaska 'Cryptography'
Cryptography waxaa loola jeedaa habka loo qariyo macluumaadka adoo u beddelaya qoraalka la akhrin karo qoraalka aan la akhrin karin iyadoo la adeegsanayo nooc ka mid ah furaha ama algorithm-ka sirta ah.
Macluumaadka la ilaaliyo iyadoo la adeegsanayo cryptography waxaa ka mid ah emayl, faylal, iyo xog kale oo xasaasi ah.
Ujeedada laga leeyahay 'cryptography' waa in la hubiyo in macluumaadka la duubay ay haysaa sirta, hufnaanta, xaqiijinta, iyo diidmada.
Noocyada loo yaqaan 'Cryptography'
Qarsoodi ayaa leh laba nooc:
Qarsoodi astaanta wuxuu adeegsadaa hal fure si uu u xareeyo oo u fasaxo macluumaadka la soo diray / la helay.
Farsamaynta Asymmetric wuxuu adeegsadaa furayaal kala duwan si uu uqarxiyo uguna duuduubo macluumaadka la soo diray / la helay.
Cipher waxaa loola jeedaa algorithm kaas oo loo adeegsado sirta iyo goynta.
Noocyada 'Cipher' waa:
Beddelka cipher waa cipher kaas oo qoraalka cad lagu badalay ciphertext.
Wareejinta wareejinta waa cifariiste kaas oo qoraalka tooska ah dib loogu habeeyay si loo abuuro tilmaam.
Ciif casri ah
Furayaasha aasaasiga ah:
Symmetric key algorithm waa algorithm oo u adeegsada hal fure u qarinta iyo goynta
Asymmetric key algorithm waa algorithm kaas oo u adeegsada laba fure sir iyo goynta
Xirmooyinka ku-xirnaanta ku-xirnaanta:
Block cipher waa cipher ka shaqeeya baloogyada cabbirka go'an ee xogta la isticmaalayo fure isku dheelitiran
Qulqulka 'Stream cipher' waa jareer ku shaqeeya hal mar markiiba iyadoo la adeegsanayo fure isku dheelitiran
DES waa halbeeg xog qarin (encryption) ah oo adeegsada sirta qaabeysan. Furaha sirta ah ee loo adeegsado sirta iyo goynta ayaa leh 64 jajab, kuwaas oo 56 ka mid ah ay si aan kala sooc lahayn u soo baxeen 8da soo hartayna loo adeegsaday baaritaanka qaladka.
AES waa algorithm iskumar ah oo sameeya isla howlgalka dhowr jeer. Waxay isticmaashaa xaddiga go'an ee cabbirka 128 iyo furayaasha saddexda cabbir: 128, 192, iyo 256 jajab.
RC4 waa algorithm fure dherer beddelaad ah oo ku shaqeeya hal waqti markiiba oo adeegsanaya hagardaamo aan kala sooc lahayn. Waxay ka tirsan tahay kooxda istiraatiijiga-furaha durdurrada toosan.
RC5 waa algorithm loo yaqaan 'parametized algorithm' kaas oo leh cabir baddal isbeddel ah, cabbirka furaha isbeddelka, iyo tiro isbeddel ah oo wareeg ah Cabbirka balooggu wuxuu noqon karaa mid ka mid ah saddexda: 32, 64, iyo 128 jajab. Cabbirka furaha wuxuu u dhexeyn karaa 0 iyo 2,040 xabo. Tirada wareegyada waxay noqon kartaa inta udhaxeysa 0 iyo 255.
RC6 waxaa laga soo qaatay RC5 waxayna leedahay laba astaamood oo dheeri ah: waxay isticmaashaa isku dhufashada integer iyo 4-bit diiwaan (RC5 waxay isticmaashaa diiwaanka 2-bit).
Algorithm-ka kalluunka loo yaqaan 'Labafish kalluunku' waa kalluun xireyaal adeegsanaya 128-bit blocks iyo hal fure oo u ah sirta iyo goynta. Cabirka furaha wuxuu u dhexeyn karaa 0 ilaa 256 jajab.
DSA waa algorithm asymmetric ah oo adeegsada furayaasha gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud. Furaha khaaska ah ayaa sheegaya cidda saxeexday farriinta, fure fure u ahaana wuxuu xaqiijinayaa saxiixa dijitaalka ah. Isdhaafsiga farriimaha ee u dhexeeya laba hay'ad, hay'ad kasta waxay abuureysaa fure dadweynaha iyo kuwa gaarka ah.
RSA waxay u adeegsataa xisaabinta qaab xisaabeedka iyo tiirarka aasaasiga ah fulinta xisaabinta iyadoo la adeegsanayo laba lambar oo waaweyn. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay heerka asturnaanta iyo sida oo kale waxaa loo adeegsadaa codsiyo kala duwan. RSA waxay isticmaashaa furayaasha gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud intay socoto sirta iyo goynta.
Diffie-Hellman algorithm waxaa loo isticmaalaa soo saarista fure wadaag ah oo u dhexeeya laba hay'ad kanaal aan amni ahayn. Waxay u oggolaaneysaa laba dhinac inay abuuraan furaha sirta kadibna ay kuqarxiyaan taraafigooda furahaas.
Hawlaha dheef-shiidka farriinta, ama shaqooyinka hal-dhinac ah, ayaa loo isticmaalaa in lagu xisaabiyo matalaadda xadhigga cabbirka go'an ee gaarka ah ee xayiraadda macluumaadka. Dib looma celin karo waxaana loo isticmaalaa in lagu hubiyo hufnaanta faylka.
MD5 waa fariin dheef-shiid kiimikaad dhejis ah oo qaata dherer dherer bilaa sabab ah waxayna soo saartaa dheef-shiid cabirkiisu yahay 128-bit. Algorithm waxaa loo isticmaalaa codsiyada saxiixa dhijitaalka ah, hubinta sharafta faylka, iyo keydinta ereyga sirta ah.
Badbaadinta Hashing Algorithm ama SHA waa algorithm oo soo saarta dheef-shiid kiimikaad sir ah oo sir ah. Waxaa jira seddex jiil oo algorithms SHA ah: SHA-1, SHA-2, iyo SHA-3. SHA-1 waxay soo saartaa 160-bit dheefshiidka, halka SHA-2 iyo SHA-3 ay soo saaraan 256, 384, iyo 512-bit dheefshiidka.
Hash ku saleysan Nidaamka Aqoonsiga Fariinta ama HMAC waa nooc ka mid ah lambarka aqoonsiga fariinta. Waxay isticmaashaa iskudhafka furaha sirta iyo shaqada hash sida SHA-1 ama MD5. Waxaa loo adeegsadaa xaqiijinta iyo hubinta sharafta.
PKI waxay u taagan tahay Kaabayaasha Furaha Dadweynaha waxayna loola jeedaa qalabka, softiweerka, dadka, siyaasadaha, iyo nidaamyada looga baahan yahay in lagu maareeyo shahaadooyinka dhijitaalka ah. Waa qaab dhismeed amni oo loogu talagalay in lagu kordhiyo sirta macluumaadka la isweydaarsanayo.
Shahaadada la saxeexay waa shahaado ay soo saartay Maamulka Shahaadada (CA). Waxay ka kooban tahay fure dadweyne iyo aqoonsiga milkiilaha.
Shahaadada is-saxeexku waa shahaado la soo saaray oo la saxeexay naftiisa. Badanaa waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin baaris ah haddii kalese lama aamini karo.
Email iyo Disk encryption
Saxeexa Dijital ah
Saxeexa dhijitaalka ah waxaa la abuuray iyada oo la adeegsanayo asturnaanta asymmetric. Waxay kuxirantahay xogta la gudbiyay waxayna u taagan tahay habka loo adeegsado xaqiijinta.
SSL waxay u taagan tahay Lakabyada Nabadgelyada ee loo yaqaan 'Secure Sockets Layer' oo loola jeedaa nidaam ku saabsan lakabka arjiga ee loo xilsaaray hubinta amniga farriinta gudbinta ee shabakadda iyo internetka.
TLS waxay u taagan tahay Amniga Lakabka Gaadiidka waxayna tixraacaysaa maamulo dejinaya isku xirnaanta macmiilka iyo server-yada oo hubiya hufnaanta macluumaadka iyo asturnaanta inta lagu jiro gudbinta.
PGP waxay u taagan tahay Ilaalin Fiican oo Qurux badan waxayna loola jeedaa hab maamuus loo isticmaalo qarinta iyo goynta aqoonsiga iyo xogta kriptograafiga. PGP waxaa loo isticmaalaa in lagu cadaadiyo xogta, saxeexyada dhijitaalka ah, cinwaanka iimeyl / jajabinta, iyo macluumaadka kale ee xasaasiga ah.
Diiwaanka Disk-ga waxaa loola jeedaa sirta dhammaan xogta ku kaydsan diskiga. Ujeeddadu waa in la ilaaliyo xogta ku keydsan diskiga isla markaana la hubiyo sirtiisa.
Cryptanalysis waxaa loola jeedaa habka loo dejiyo ciwaanada iyo qoraalka la xareeyay. Waxay aqoonsan kartaa baylahnimada ka jirta nidaamka loo yaqaan 'cryptosystems' oo markaa waxay ka soo saari kartaa qoraal fudud midka la soo duubay.
Hababka loo isticmaalo 'cryptanalysis' waa:
Khadka toosan ee loo yaqaan 'cryptanalysis' waxaa loo isticmaalaa ciphers block
Kala-duwanaanta 'cryptanalysis' waxaa loo adeegsadaa algorithms-ka muhiimka ah
Isku-darka 'cryptanalysis' waxaa loo isticmaalaa ciphers block
Farsamooyinka loo adeegsado cabbirka xoogga algorithm-ka sirta iyadoo la jabinayo sirta waxaa ka mid ah:
Farsamada xoogga caayaan ayaa iskudayeysa iskuxir kasta oo suuragal ah oo jilayaal ah si loo jebiyo sirta
Farsamada falanqaynta isdabajoogga waxay falanqeeysaa inta jeer ee astaamo gaar ah ay dhacaan kuna saleysan taas oo jabisa sirta
Xeeladda khiyaanada iyo khiyaanada waxay u baahan tahay adeegsiga farsamooyinka injineernimada bulshada si looga soo saaro furayaasha loona jebiyo sirta
Farsamaynta hal-mar ayaa loola jeedaa sirta aan la jebin karin taas oo qoraalka cad lagu daro fure ka kooban noocyo aan soo noqnoqon oo jilayaal ah, oo si aan kala sooc lahayn loo soo saaray, isla markaana leh dherer la mid ah sida farriinta la diray.
Weerarka kaliya ee Ciphertext waa weerar uu weeraryahanku ku haysto uruurinta qoraalo cipher ah kuwaas oo u baahan in la falanqeeyo si loo helo furaha oo loo kaydiyo qoraalka.
Weerar caan ah waa weerar uu weeraryahanku ku haysto qayb ka mid ah daliilka oo ku saleysan halka ay ka soo qaataan furaha.
Weerar cad oo la xushay waa weerar uu weeraryahanku ku soo qaatay fure isagoo falanqeynaya qoraalka cad iyo ciphertext u dhigma ee uu soo saaray weeraryahanku.
Weerar ciphertext la doortay waa weerar uu weeraryahanku ku helayo qoraalka cad ee loo yaqaan 'ciphertexts' iyo iskuday si loo helo furaha.
Weerar xoog leh waa weerar kaas oo iskuday kasta oo muhiim ah oo suurtagal ah la isku dayo ka dhanka ah ciphertext ilaa furaha saxda ah laga helo. Weerarkani wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo awood farsameyn.
Weerarada qaamuuska waa weerar uu weeraryahanku abuurayo qaamuus cadcad iyo ciphertext ka dibna u adeegsado qaamuuskaas inuu ku jebiyo sirta.
sida loo shaashado s10e
dib u eegis samsung galaxy grand prime
sida loo xiro ipad si loo kormeero
Sida loogu ciyaaro dhawaaq maqal la'aan ah iPhone ama iPad (FLAC, iwm)
Heshiiska: Samsung Galaxy S8 iyo S8 + waa $ 150 ka raqiisan iibsiga Best Buy
Apple wuxuu khuseeyaa patent-ka shaashadda laptop-ka shaashadda laga saari karo ama: Ilaa intee in le'eg ayaan ka arki doonnaa iPadBook Air?
Android 5.1.1 oo ku shaqeyneysa Galaxy Note 4 oo ku habboon; waa la yaraysan karaa 64-bit
Samsung iyo Best Buy waxay ku bixiyaan qiimo dhimis weyn Galaxy Tab S4
AT&T waxaa lafilayaa inay bixiyaan iPhone 6s horay loo siiyay oo kaliya $ 300
Verizon niyad jab, AT & T layaab, iyo T-Mobile ayaa ku iftiiminaya tijaabooyinka xawaaraha cusub ee 5G
IPhonekee ayaa heli doona iOS 15?
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee dagaalka ee iPhone ama Android kaaga 2020